UDISHA PATANI NJENGOMTSHAKAZI WESABYASACHI UNOKUKUNIKA IINJONGO EZIPHAMBILI ZE-'DULHAN'- IPAMPERSPEOPLENY.COM - IFASHONI
UDisha Patani Njengomtshakazi weSabyasachi unokukunika iinjongo eziphambili ze'Dulhan '
Ekhaya Ifashoni Impahla yokunxiba ye-Bollywood I-Bollywood Wardrobe Dona Ngu UDona Dey | Nge-21 kaDisemba ngo-2017
Ngelixa singekho ngaphezulu komtshato ka-Anushka, umdlali weqonga uDisha Patani ulapha ukusinika iinjongo zendlela yokwenyani.
Ngelixa le mifanekiso inokukulahlekisa ukuba ucinge ukuba umlingisi we-Bollywood watshata ngokufihlakeleyo emva kweVirushka, ngokuqinisekileyo uye waziguqula iitafile wasothusa sonke ngefoto yakhe yomtshato yomtshato wenkampani yaseBombay yaseBombay, eBridelan India.
UDisha wayenxibe le Sabari ye-Sabari emnandi, eyayimataniswa neblawuzi eyenziwe ngokwesiko kwaye wasinika ngokupheleleyo iinjongo zesitayile ngenkangeleko yakhe ehlekisayo.
Isari kunye neblawuzi zazingonelanga ukusitsalela ngelixa ubucwebe obufanayo kunye neklasikhi bangena. Izixhobo ezihambelana nesari ziqhelekile kwaye zintle ngokwenyani. Amacici, isacholo somqala, imisesane kunye nee-baajubandh zinokukwenza ukuba ubonane nayo yonke inkangeleko yokubonakala.
Umyeni ogculelayo wayejongeka njenge-dapper ogqithileyo kunye nendlela le modeli yajika ngayo kwimbonakalo yomtshato wakhe, wasishiya siphele ngokupheleleyo. Isuti yakhe eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nembonakalo yeendevu zinokuyenza nayiphi na intombazana ukuba iyeke ngaphezulu.
Ngokudubula okuhlekisayo, kukwakho nomfanekiso kaDisha ebuza nomama wakhe on-shoot kunye nolungelelwaniso lwesinxibo somtshakazi nonina ngokuqinisekileyo baya kukushiya umangalisiwe.
Abafazi abathandekayo abahle
Ukujongwa kwentombi nganye yomtshato kwakungaqhelekanga. Izambatho ezifanayo ezinomtsalane kunye nobucwebe obulinganayo ngokuqinisekileyo bunokunika iinjongo zesitayile sakho semigulukudu. Unokutshintsha indlela onxiba ngayo phakathi kwe-lehengas, i-saris okanye i-anarkalis. Thega iqela lakho lemigulukudu ukuze ubazise ngesi sicwangciso somtshato wakho.
Ayisiyiyo nje igenge yamantombazana, usapho nalo lwaluzihombise nge-monotone hue kwaye lukhangeleka lufezekile. Ukuzola kombala kubenza babonakale bemhle.
Imifanekiso inokwenza nabani na afune iinjongo ezinjalo zomtshato kwaye abeke umfanekiso-ogqibeleleyo kwisakhelo kunye neqabane labo. Isitayile kunye notshatha bahlangana kunye ukunika iziphumo ezinje.
ulawula njani umsindo kubudlelwane
Uyenza njani i-ugadi pachadi kwi-hindi
zii-oats ezilungileyo zokunciphisa umzimba
Umboniso bhanya-bhanya weSunny Leone
ukugqobhoza indlebe kwiintsana ngenxa yesayensi